Bike Indrindra Friendly tanàna Eoropa sy ny fomba ahatongavana any | Save A Train
Home > Travel Europe > Bike Indrindra Friendly tanàna Eoropa sy ny fomba ahatongavana any
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 27/12/2019)
Raha ela mba hahita ny sasany amin'ireo Eoropa tsy maintsy-hitsidika toerana, vitsivitsy ny bisikileta indrindra tanàna namana dia azo antoka fa hahatonga ny lisitra. Ireo tanàna dia lehibe mba hijery ny bisikileta, mahatonga azy ireo ho tsara nandeha tao amin'ny teti-bola. Ary afaka tonga any lamasinina. Ireto ny folo tanàna namana bisikileta indrindra any Eoropa:
1. Bike-Friendly Amsterdam, Pays-Bas
Amsterdam dia efa teo foana ny tena namana bisikileta tanàna any Eoropa. Efa nisaraka tsingerin'ny lalany fa tsy sakeli-dalana eto, mamela anao ny handeha na aiza na aiza fiara-maimaim-poana. Afaka tonga mora foana izany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby avy any Paris, Brussels, Copenhagen sy ny toerana lehibe eoropeanina.
2. Bike-Friendly Copenhagen, Danemark
Copenhagen vola over € 134 tapitrisa eo an-dalam-pandrosoana ny bisikileta Network nandritra ny taona maro. Izay nandray anjara tamin'ny fanaovana ny lalana bisikileta tambajotra manaitra ary nandefa Copenhagen ho any amin'ny greenest Eoropa toerana.
Hamburg ho any Copenhagen Lamasinina
Hanover ho any Copenhagen Lamasinina
Berlin ho any Copenhagen Lamasinina
3. Bike-Friendly Berlin, Alemaina
Berlin no niasa ho lasa iray amin'ireo tanàna namana bisikileta indrindra any Eoropa nandritra ny fotoana kelikely. Tamin'ny farany izy ireo no nanao azy, be pitsiny noho ny fanentanana ny fiaraha-monina ny bisikileta. Amin'ny maha iray amin'ireo hubs ny fiaran-dalamby Eoropeana fifamoivoizana, Berlin dia tena mora ny hahazoana ny.
4. Utrecht, Pays-Bas
Tanàna ao amin'ny Pays-Bas tia ny bisikileta. Utrecht fampiasam-bola be dia be ho any ny bisikileta foto-drafitr'asa. Long bisikileta eny an-dalambe sy ny fijanonana trano lehibe ho azy mora ampiasaina bisikileta any.
Bruxelles ho Utrecht Lamasinina
Berlin ny Utrecht Lamasinina
Paris ho Utrecht Lamasinina
5. Antwerp, Belzika
Antwerp indrindra no Belzika namana bisikileta tanàna, amin'ny mandroso Network ny bisikileta lalana. Amin'ny tetikasa lehibe mikendry ny fanatsarana azy io bebe kokoa, Antwerp azo antoka fa hijanona eo an-tampon'ny toerana bisikileta any Eoropa.
6. Vienna, Aotrisy
Vienna mirehareha fampiharana Europe voalohany entana bisikileta fanofana rafitra. Anisan'ny hetsika hafa izay nanohana ara-bola ny tanàna malala-tanana mba ho Vienna kokoa bisikileta-namana no fananganana ny 1300-km bisikileta lalana Network.
7. Basel, Soisa
Basel ny fantatra zavatra vitsivitsy, ary ho bisikileta-namana dia ny iray tamin'izy ireo. Na izany na tsy Weather na vanim-potoana, ianao dia afaka mahita ny mponina ao Basel mampiasa ny bisikileta mba hitety manodidina mora foana. Afaka hahatratra Basel avy any Amsterdam lamasinina mivantana.
8. Münster, Alemaina
Anisan'ireo Alemaina namana bisikileta ny ankamaroan'ny tanàn-dehibe, Münster miaro ny fandaharana tsara hatrany. Ny tanàna dia miasa mafy mba hahazoana antoka ny mpitaingina bisikileta dia faly sy ny foto-drafitrasa sy ny fiarovana bisikileta.
Essen an'i Münster Lamasinina
Bielefeld an'i Münster Lamasinina
Cologne an'i Münster Lamasinina
Hanover an'i Münster Lamasinina
Zavatra tanàna matetika dia tsy eo amin'ny tanàna namana bisikileta indrindra any Eoropa, Verona mijoro fa tena tsara. Tena tsara izany tanàna hijery bisikileta, ary ny fiaran-dalamby mitaingina avy Roma ho any Verona ihany no manampy ny hatsaran-tarehin'ny ny dia.
Rimini ho Verona Lamasinina
10. Munich, Alemaina
Munich manana drafitra mazava ny fikasana hanao bisikileta Network faritra midadasika sy hanatsara ny foto-drafitr'asa bisikileta. Ny tanjona farany dia ny hanatratra 30% Modal anjara ho an'ny bisikileta. Raha te-hanandrana avy mahazo manodidina Munich amin'ny bisikileta, afaka mandeha any amin'ny fiaran-dalamby avy any Berlin, Vienna, ary Zurich, any amin'ny tanàna hafa.
Moa ve ianao vonona ny hamangy ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra Eoropa mampiasa afa-tsy ny bisikileta sy ny fiaran-dalamby? Hiomanana amin 'ny traikefa nahafinaritra ny androm-piainany, ary boky ny saran-dalana tany am-boalohany!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-bike-friendly-cities%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Bike-Friendly #bisikileta Bike bikefriendly europetravel Train Travel